Accessgwè ndị na-agba ígwè - China Ngwa ngwa ngwa ụlọ ọrụ, ndị na-eweta ya
A na-ejikarị njikọ njikọ iji kpokọta insulators nkwusioru n'ime eriri, na eriri insulators jikọtara ma kwụsịtụ na ogwe aka obe nke ụlọ elu osisi. Suspension mwekota na nje mwekota na mkpuchi njikọ nke eriri, njikọ nke eriri oyiyi akwa na okporo osisi okporo osisi na-ejikwa njikọ oyiyi akwa. XYTower oyiyi akwa U-ekara nghọta mgbanaka emepụta N'ogbe Ijikọ oyiyi akwa, makwaara dị ka waya-nghọta akụkụ. A na-eji ụdị akwa akwa a ...
Suspension mwekota na-eji ndozi waya na insulator eriri ma ọ bụ kpọgidere àmụmà nchedo waya. Na ogologo okporo osisi, enwere ike iji ya na-akwado ndị na-eduzi transposition na mgbatị mgbatị na okporo osisi transposition. Idozi nke jumper nke ụlọ elu nkuku. Ihe nkwekọ na ndị na-elekọta ya bụ ígwè na-edozi, cotter-pin bụ igwe anaghị agba nchara, akụkụ ndị ọzọ bụ nchara. Akụkụ niile dị egwu na-ekpo ọkụ.
Ike oyiyi akwa bụ nile di iche iche nke ngwa nke na-eji jikọọ ma ọ bụ na-akwado ndị electric ngwaọrụ nke mere na poolu akara ga-amata ike nnyefe. A na-akpọkwa ihe ndozi ike, akụrụngwa ike pole, ihe ntinye ike, eriri eletriki. Ike oyiyi akwa nwere atụmatụ dị ka n'okpuru ：
• Ike na-agbasa ike
• Na-ekpo ọkụ-dipgalvanized
• Ezigbo ire ụtọ
• Nke ziri ezi
• Na-adịgide adịgide na mma
Ndị na-agbapụ iko
Ndị insulators bụ ngwaọrụ arụnyere n'etiti ndị na - eduzi ikike dị iche iche ma ọ bụ n'etiti ndị na - eduzi ya na ala nwere ike mejupụta ya, ma nwee ike iguzogide nrụgide na nrụgide igwe. Ọ bụ njikwa mkpuchi mkpuchi pụrụ iche nke nwere ike ịrụ ọrụ dị mkpa na ahịrị ntinye. Na mmalite afọ, a na-ejikarị insulators eme ihe maka okporo osisi telegraph. Nwayọọ nwayọọ, a kwụgidere ọtụtụ insulators dị ka diski n'otu nsọtụ ụlọ elu njikọ waya eletrik. Ejiri ya mee ka oghere dị ogologo. A na-ejikarị ugegbe ma ọ bụ ceramik eme ya, a na-akpọkwa ya insulator. Ndị insulators ekwesịghị ịda n'ihi nrụgide electromechanical dị iche iche kpatara site na mgbanwe na gburugburu ebe obibi na ọnọdụ ọkụ eletrik, ma ọ bụghị ya, ndị insulators agaghị enwe mmetụta dị oke mkpa ma mebie ojiji na ndụ ọrụ nke usoro ahụ niile.
1.Size na teknuzu data nke 33kv pin post mejupụtara insulator Ydị: FP-33/8 gosiri gosiri voltaji (KV) Gosiri n'ibu erughị ala ibu (KN) Structure elu (mm) H egbochi ihe anya (mm) h Min elu ọnụ creepage anya (mm) 1min ike ugboro mgbochi mmiri na-eguzogide volta (kv) Igwe ọkụ na-efegharị efegharị zuru oke na-eguzogide voltage (ọnụ ọgụgụ kachasị elu) 33 8 417 338 1160 90 200 2. Ihe nke 33kv pin post mejupụtara insulator 1) .Silicon Rubber maka sheds / ụlọ. 2) .Glass-eriri mesikwuru epo ...
Erughị ala mwekota (erughị ala mwekota, nje mwekota, nwụrụ anwụ-ọgwụgwụ mwekota) na-ezo aka ngwaike eji idozi waya na-agba erughị ala nke waya na kpọgidere waya ka erughị ala eriri ma ọ bụ ụlọ elu. A na-eji mpempe ihe mgbochi maka nkuku, nkedo, na njikọ njikọ. Gburugburu waya silidini nke nwere aluminom nwere ike siri ike, enweghị nchekasị siri ike, ma chebe eriri anya ma na-enyere aka na mbelata vibration. The zuru set nke ngwa anya cable tensile ngwaike na-agụnye: tensile pre-t ...